Xisbiga Wadajir oo Guddiga Doorashooyinka iyo DFS ku eedeeyey ineysan doorasho dhici karin 2020-ka – Kalfadhi
Xisbiga Wadajir oo Guddiga Doorashooyinka iyo DFS ku eedeeyey ineysan doorasho dhici karin 2020-ka
Xisbiga Wadajir ayaa ka fogeeyey in Axsaabta Siyaasadda Soomaaliya ay wax saameyn ah ku leeyihiin iney doorasho qabsoomi weyso 2020-ka, kadib markii ay Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Qaranka, Xaliima Ibraahim Ismaaciil (Xaliima Yarey), ku eedeysay Axsaabta Siyaasadda Soomaaliya in ay iyagu ahayd in ay doorasho u diyaarsanaadaan, laakiin aysan taasi ilaa iyo hadda muujinin.
Guddoomiyaha Xisbiga Wadajir, Kamaal Guutaale, ayaa u sheegay Kalfadhi in eedda Guddoomiyaha Doorashooyinka Qaranka, Xaliima Yarey, aysan qaban axsaabta siyaasadda oo, sida uu hadalka u dhigay, ay Xaliima dooneyso iney saarto eed ay Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) leedahay. Kamaal waxa uu sheegay inuu u arko in ay Xalimo u sahlanaatay in ay eedeyso xisbiyada, intii ay eedeyn lahayd dowladda.
“Dee Xaliimo malaha waxay ka baqeysaa in ay dowladda wax ka sheegto. Marka, meeshii jilicsan iney ku taagsato ayaa u fududaatay, oo ay xisbiyadii tiraahdo idinkaa doorsho idinka dhici la’dahay” ayuu Guddoomiyaha Xisbiga Wadajir, Kamaal Guutaale, ku yiri wareysi uu siiyey Kalfadhi. “Eeddu laba qof ma wada qabato ee cidda ay qabato gacanta haku fiiqdo Xaliimo” ayuu hadalkiisa ku daray.
Isagoo fasiraya sida ay dowladdu ugu eedeysnaan karto in aysan muuqan ifafaale sheegaya in ay doorasho ka dhici doonto dalka 2020-ka ayuu ku eedeeyey Guddiga Doorashooyinka inuu ka gaabiyey diiwaan-gelinta cod-bixiyayaasha, taas oo uu sheegay in ay ahayd iney mar hore dhacdo, si ay axsaabtu ugu loolamaan sidii ay ku heli lahaayeen, una qoran lahaayeen, cod-bixiyayaashaas.
“Guddiga Madaxa-banaan ee Doorashooyinka Qaranka waa inuu cod-bixiyayaal diiwaan-geliyaa” ayuu yiri Kamaal. “Waa adag tahay doorsho in la qabto, waligeenna waan ogeen, laakiin waxaa muuqata, waa meesha ay ka carareyso iney (Xaliimo) farta ku taagto” ayuu hadalkiisa raaciyey. Kamaal waxa uu sheegay in haddii ay doorasho dhici weyso ay eeddeeda qaadan doonto DFS, sida uu hadalka u dhigay.
Guddoomiyaha Xisbiga Wadajir waxaa, isaga oo daliilinaya sababta uu sidaas carrabka ugu adkeynayo, uu yiri “Sharciga Doorashooyinka oo naloo keenay Nofeembar ilaa iyo hadda waa xayiran yahay”. Sidaas uu sheegayo ayaa ka dhigeysa inuusan sharcigaas wali shaqo gelin muddo 5 bil ah. “Diiwaan-gelinta cod-bixintaa u xayiran, waxaa u xiyiran in magaalooyinka la xoreeyo, waxaa u xayiran in aysan Dowlad Goboleedyadii ilaa iyo hadda wax la qaban” ayuu Kamaal ku eedeeyey DFS.
Laakiin, Kamaal waxa uu rumeysan yahay in aysan doorasho ka dhici karin Soomaaliya inta uu xaalka siyaasadda iyo midka amaan ee dalka yahay sida uu hadda yahay. Waxa uu sheegay in doorasho la aado ay ka horeyso siyaasadda oo degta.“Siyaasadda iyo doorashooyinka waxaa ka horeeya, xasilooni siyaasadeed in la helo” ayuu Kamaal Guutaale ku yiri wareysiga uu siiyey Kalfadhi.
Xildhibaan Fiqi oo u soojeediyey Madaxweyne Farmaajo inuu ku daydo Madaxweynaha Jabuuti
Golaha Wakiillada Puntland oo isu diyaarinaya dib ugu noqoshada hawlaha Kalfadhiga 43aad